Iza moa i Martin Vrijland? : Martin Vrijland
Iza moa i Martin Vrijland?
Iza moa i Martin Vrijland ary nahoana izy no miezaka mafy manoratra lahatsoratra?
Tao anatin'ny lahatsoratra vitsivitsy dia nohazavaiko fa ny haino aman-jery hafa any Holandy dia voafehy tanteraka. Miezaka ara-bakiteny ny 'fanaraha-maso ny asa fanompoana miafina' aho. Any Holandy, ny klioba dia antsoina hoe AIVD. Mba hahafahanao manaporofo izany, dia tena mila mamakivaky ianao. Fa saika nahomby aho fa tsy notendrena, saingy misy hetsika maro, izay nahatonga ahy horoahina. Ny zavatra tokony hataoko dia mamaritra fohifohy ny tantaran'ny firoboroboako amin'ny maha-mpanoratra azy ary manondro ny fifandimbiasana azonao vakina ho anao raha manaiky ny didim-pitsarako ianao na tsia.
Rehefa nanomboka nanoratra tamin'ny 2012 aho dia tsy te-hanao izany mandrakizay. Ilay mpampiasa ahy farany izay niasako ny mpiasan'ny varotra iraisam-pirenena dia banky ary nandritra ny asa izay nataoko taty aoriana, dia feno "fientanentina vita amin'ny lamba sy fanamboarana fiara" aho. Nanapa-kevitra ny hanoratra aho nandritra ny fotoana fohy (nieritreritra 'vetivety') ary nisafidy solon'anarana mba tsy hanimba ny CV-ko. Ka navelako nitifitra tamina adihevitra tsara aho, mba hitazomana ny tombontsoa bebe kokoa. Nanomboka tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny tranokalan'ny Argusoog (efa nofoanana ankehitriny) ny fanoratana, ary nofaranana tao amin'ny tranokalaniko manokana. Taorian'ny volana vitsivitsy dia nitsidika tampoka 150 in-arivo isan'andro ilay tranonkala tamin'ny fotoana nitrangan'ny raharaha Anass Aouragh. Izany dia satria nanapa-kevitra aho fa handeha fotsiny amin'ny 'sehatra misy heloka bevava' miaraka amin'ny fakantsary, satria i Peter R. de Vries dia efa nilaza tamin'ny fahitalavitra fa ny volon-doha sy ny volo dia hanadihady an'ity tranga famonoan'olona ity. Tena tiako aho raha izany no nitranga ary nandeha niaraka tamin'ny fakantsary amperinasa ho any amin'ilay toerana. Tao no nahitako fako be teo amin'ny toerana izay nahitana an'i Anass ary vavolombelona nanambara fa nandao ny alikany ry zareo tamin'io maraina io. Izany toe-javatra izany dia nibodo an'i Holandy manontolo ary izaho koa namoaka ny tatitra momba ny autopsy NFI. Nipongatra be tao amin'ny vaovao izany, satria tsy nisy olona nirongatra teo aloha, saingy tsy nambara ny anarako (izay hanome mpitsidika bebe kokoa ny tranokalako).
Saika avy hatrany rehefa voromailala Raha izany, nanaiky aho nanafika tamin'ny isan-karazany ao anaty aterineto sy ny fanalam-baraka sy fanendrikendrehana na dia eo aza ny tsipiriany be dia be, ary tena tsy mbola nanao na inona na inona fanambarana hatramin'izao miaraka. Ankoatra izany, tsy misy mpisolo vava izay sahy mandoro ny dingana iray rehefa manazava aho fa azo atao ny manaporofo fa ity ezaka ity dia avy amin'ny governemanta. Tsy nahazo valiny avy tamin'ilay mpisolovava mpikomy Sven Hulleman ihany koa aho.
Ny haino aman-jery fampitam-baovao dia nampihetsi-po tamin'izany fotoana izany ary nihoatra ny orinasa sy ny olona izay tsy henoko na tsy naheno ahy talohan'ny nanombohako mpanoratra. Iray tamin'izy ireo i Micha Kat. Nasaina ihany koa aho ho any amin'ny Frontier symposium ary natolotra mihitsy aza ho an'ny 'Frontier Award'. Avy eo dia nanomboka nipoitra ireo zavatra voalohany. Noho izany dia ho tafatafa amin'ny John Consemulder, saingy tampoka dia tsy afaka nandeha an-tongotra intsony. Nalefa ny sariko, saingy tsy nalefa na aiza na aiza. Marcel Messing (anarana malaza any amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra) dia nitondra ahy tany amin'ny efitrano iray taorian'ny fandaharana famaranana ny mpihira hypnotista. Eto izy dia nilaza tamiko manokana fa mila mitandrina tsara aho. "Izy ireo" dia afaka mifantoka fotsiny amin'ny fitaovam-piadiana enti-miasa.
Ny mpanatrika ao amin'ny haino aman-jery hafa ankehitriny fanatically manohitra ny am-polony ny toerana manokana ho fanalam-baraka sy fanendrikendrehana ny adiresy toy ny holatra toa hitsangana avy amin'ny tany. Hitako fa ny hery mitondra ao ambadik'ity fanalam-baraka sy fanendrikendrehana ity dia mpiasa an-trano (ary ny Pretra OTO) Jeroen Hoogeweij izay, izay nipetraka ara-bakiteny teo an-jorony niaraka tamin'i Micha Kat. Na izany aza, nalain'i Micha Kat aho. Kat hatramin'ny tamin'izany fotoana izany ny anarana lehibe tao amin'ny fampahalalam-baovao hafa, satria niady nandritra ny taona maro izy noho ny fametavetana zazalahy ambony indrindra: Joris Demmink. Kat nanasa ahy hanatona ny dingana Demmink amin'ny fototra Rustige Spijker aho ary nandoa ny solika. Tamin'io fotoana io i Kat dia toa afaka nanipy vola toy ny tsy misy na inona na inona, ka nahasarika ny sain'ny olona. Nandritra ireo fivoriana dia tsapako fa ireo mpikambana ao amin'ny fototra izay niampangan'i Demmink fa nitaintaina sy natahotra ahy. Izany no nahatonga ahy ho liana. Nahoana no niady saina ahy izy ireo? Tao an-toby ihany aho? Rehefa nahatsikaritra ny loko menaka teo am-pelatanan'ny mpikambana iray aho, dia nanontany tena aho hoe ahoana no ahafahan'ny mpikambana iray ao amin'ny fototra izay nahery vaika nanafika ny fanjakana holandey dia afaka nitafy volom-borona. Noho izany dia nandeha nihady teo am-piandohan'ny vahoaka tao amin'io fototra io aho. Ohatra, nahatsikaritra aho fa ity mpandrindra kofehy antsoina hoe Ben Ottens ity dia nanampy tamin'ny fanatsarana ny lanjan'ny tany manodidina an'i Schiphol amin'ny fampiasana ny fambolena mba hananganana tany. Ny fianakaviana Poot, izay namatsy vola an'io fototra io ny Rustige Spijker, dia afaka nitaky an'arivony avy amin'ny fanjakana Holandey ho an'ireo tany (anisan'izany ny tetikasa fampandrosoana). Hitako ihany koa fa niara-niasa ny fototra Jack Abramoff, lehilahy iray izay namono 'avo lenta' tany Etazonia niaraka tamin'ireo sarimihetsika fanararaotana hanao firaisana. Noho izany tsy nahy aho ary tsikaritro fa niharan'ny famatsiam-bola avy amin'ny fianakaviana Poot i Kat ary ny rehetra dia lasa famitahana lehibe. Ny tranga manohitra an'i Demmink dia tsy niodina tamin'ny famoahana ny fanararaotana zaza tsy ampy taona, saingy toa be kokoa ny fanenjehana ny fanjakana Holandey.
Tranonkala rehetra ao amin'ny haino aman-jery hafa, na izany aza, niseho tamin'ny fotoana manodidina ny fanararaotana ny (mandraka ankehitriny) Kat Mika mahery fo, tsy te-hiatrika. Nanasa ahy mihitsy aza ny radio mba hahafahako manazava ny zavatra hitako. Nisy nilaza tamiko fa mety ho 1 1 mba hanadihady, fa nandritra ny fampitàna mivantana tampoka dia nanambara fa Mika Kat koa ao amin'ny fampisehoana. Izany no fomba raitra iray, fa ny fampitana Kat kely no tsara, satria fotsiny aho nahavita mamily fa efa nandoa ny tanan'ny tokoa fianakaviana sy niara-niasa tamin'ny Jack Abramoff. Ny fampitam-baovao hafa rehetra dia tsy niraharaha ahy ho toy ny pariah. Dia afak'ireo ny tanàna rehetra hiala ho ahy amin'izao opprobrious sy mpanendrikendrika fanafihana ary rehetra (afa-tsy Niburu.co sy ny fanairana Mika Kat Online toerana) na zara raha tsy nametraka rohy ho ny lahatsoratra, fa ankehitriny dia tsy maintsy hamela ahy izany velively, ary na dia nanafika fanafihana noho ny fananako an'i Micha Kat.
Talohan'izany rehetra izany, izaho dia nanasa an'i Marcel Messing ho fanatrehana fihaonana hampiaraka ireo hery ao amin'ny fampitam-baovao hafa any atsimon'ny firenena. Tao no nahazo fanohanana teo aho satria nomena vola handoavana ny saram-pidiko. Mazava fa ny tombotsoan'ny WW-dia dia orinasa misidina. Tsy afa-niala afa-tsy tamin'io fotoana io aho ary tamin'izay fotoana izay ny tranoko dia efa noroahina ho voatery niaina an-keriny henjana. Izany no antony tsy maintsy nandrohako ny ora 4,5 sy ny ora 4,5 tao anaty fiara efa tranainy. Tamin'izany fivoriana ny haino aman-jery hafa tranonkala, izay saika ny olona rehetra ny lazany ao anatin'ny haino aman-jery hafa dia nanatrika (Marcel varahina Broere Ad, Guido Jonkers, sns) niresaka momba ny fametrahana ny fiaraha-miasa. Tsy maintsy misy fantsona iombonana ho an'ny fampahalalam-baovao hafa. Nilaza i Marcel Messing fa fantany ny olona te hanao olona an-tapitrisany. Hitako izany fanamarihana mahagaga izany ary nanangana ny fanontaniana hoe iza ireo "vahoaka" ireo. Tsy nahita aho, satria ny fanatrehako dia iray ihany. Nanjary loza mitatao aho taorian'ny nanesorana an'i Micha Kat.
Ny nify miaraka amin'izany
Hatramin'ny 2014 dia indro tampoka aho nahita ny anarana vaovao miseho eo amin'ny sehatra. Ny vehivavy iray atao hoe Irma Schiffer niseho tampoka manoratra lahatsoratra amin'ny lohahevitra izay Niditra ary toy ny hoe nisy ho nanomboka hafa Martijn Vrijland amin'ny endrika ity Schiffer Irma. Io ramatoa io dia navotsotry ny tranonkala fantatra amin'ny fampahalalam-baovao hafa. Koa izahay nahita hiseho an-tsehatra mpanao gazety tranainy atao hoe Judy Monshouwer izay nanao toy izany koa ny zavatra efa natao teo anoloan'ny mpanao gazety alemà Udo Ulfkotte. Ulfkotte 17 taona niasa Frankfurter Allgemeine ny Zeitung, Frankfurter Allgemeine 'na' FAZ 'ary nivoaka tamin'ny boky iray izay nanambara fa ny CIA kolikoly mpanao gazety indraindray. Holandy tsy afaka nijanona any aoriana, noho izany dia nahazo ny ny 'Udo Ulfkotte' amin'ny endrika fiantrana sy azo antoka mitady Janneke Monshouwer. Nitory bebe kokoa momba ny fanaovan-gazety holandey izy. Ny Fikambanana WantToKnow, Earth Matters, ary tranonkala maro hafa dia nanosika mafy ireo anarana vaovao voalaza etsy ambony. Izay indrindra no tadiavin'ny Holandey fifohazana.
Nahita tampoka ihany koa izahay ny fisehon'ny karazana anarana hafa rehetra, toa an'i Martijn van Staveren, William Felderhof sy Coen Vermeeren. Ny olona rehetra izay nandray anjara tamin'ny sehatra "teoria conspiracy" na ara-panahy. Nitsangana tampoka izy mitsimoka avy amin'ny tany ary toa izany, satria ny tena mavitrika 2013 fotoana, dia lasa Nananika ny tampoka lehibe ny hahazo ny fifohazan'ny olona tany Holandy. Tsy anjarako ny miresaka sy mameno ny anarana rehetra 1 ho an'ny 1, satria afaka mahita ianao fa tsy misy azo atokisana. Manoritra ny fomba fijeriko fotsiny aho. Martijn van Staveren Efa nifampiresaka indray mandeha aho; Ny Willem Felderhof dia tampoka ny hery mitarika ao ambadik'ireo andian-tafatafa antsoina hoe 'Open Mind' sy Coen Vermeeren no nanohina ny tenany ho mpahay toe-karena Ufo sy 911.
Inona no anarana ireo rehetra ireo no mitovy dia ny fiakaran'ny haingana sy ny teti-bola toa tsy manam-petra, ny fahafahana ary mahatsapa tsara ny mombamomba azy sy ny fampiroboroboana ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra tany amin'ny haino aman-jery hafa. Izay afaka ary afaka mihevitra azy io ho tsara, raha tianao hamaly faty, fialonana, kivy na tena namorona ny fitokana-monina 'Martin Vrijland afaka mandinika. Tsy misy izany. Aleoko manana fomba fijery mifanohitra tonga miasa tsara niaraka tamin'ny mpitady ny fahamarinana, mba hifantoka amin'ny nanoratra momba ny ny fomba fijeriny ny raharaham-baovao sy ny amin'izao fotoana izao, fa satria foto-kevitra Voamariko fa ara-bakiteny-keriny ary matetika no mifandray amin'ny desinfo na Lalan-diso, tsapako fa tokony hanome fampitandremana mazava aho. Mampahatsiahy anao ihany koa aho fa ny habaka rehetra tao amin'ny fampahalalam-baovao hafa dia nandao ahy fony aho (ary nanohitra hatramin'ny fotoana fohy) dia nanafahako mpangalatra Micha Kat. Tokony hanao peratra volamena izany.
Inona no vaovao mitsimoka rehetra holatra ihany koa no mitovy dia fa tsy hijaly toa fahavoazana ny fanambarana ny "firaisana tsikombakomba." Ilaina ve izany? Farafaharatsiny mahavariana ny manamarika fa nitranga tamin'ity raharaha ity izany. Izay tsy mitsahatra fanalam-baraka sy fanendrikendrehana momba ny fisolokiana, fampidirana am-ponja, kapoka sy ny sisa, fa aza dia tonga hatramin'ny tsipiriany maro momba izay ny zanako vavy, anisan'izany ny taona, fonenana sy ny sekoly no nalefa. Saingy tsy nahitana azy tanteraka izany ary tsy notendren'ireo toerana fampahalalam-baovao hafa ireo. Eny, angamba angamba ianao no mandoa izany amin'ny tenanao, mety ho ny eritreritra, fa ny zava-misy dia noforonina ny fanambarana ary tsy misy dikany ny fanambarana; ny zava-misy dia voaporofo fa azo avy amin'ny andian'olona mpiasa izany; ny tsy fisian'ny fanafihana tahaka izao; Ankoatra izany dia tokony hametraka fanontaniana vitsivitsy izy ireo mba hampiroboroboana sy hifanohana. Angamba izy ireo no nampiofanina sy nampidirin'ny AIVD? Na izany ve hevitra fiokoana?
Andraso kely. Noho izany dia afaka mino isika fa ny governemanta dia mampiasa ny sainam-pirenena sy ny fampielezan-kevitra ary mampiasa ny fampahalalam-baovao mahazatra, saingy tsy azontsika inoana fa ny serivisy miafina dia manana ny fampitam-baovao hafa ao am-paosiny? Fa maninona ianao no te hanao izany? hetsika mampidi-doza mitazam-potsiny? Efa nanambara i Vladimir Lenin fa ny fomba tsara indrindra hifehezana ny fanoherana dia ny hanomezana fitarihana an'io fanoherana io. Sa zavatra iray ihany no nampiharina tao amin'ny Firaisana Sovietika taloha? Mety ho ny haranon'ny orita AIVD any Holandy ve dia mety ho manan-karena bebe kokoa noho izay eritreretin'ny maro? Mety izany ilay godfather ny fampahalalam-baovao mahazatra holandey, Marcel Messing, izay tonga tao amin'ny faribolam-pirazanana ambony ary tsy hita ao amin'ny freemasonry, no mpanorina ity fitsipika ity any Holandy? Mba hanatanterahana fanoherana tsara dia tsy maintsy omenao ny olona ny zavatra tadiaviny: 'ny marina'.
Inona no marina?
Ao amin'ny fikarohanao ny fahamarinana, ny tanjona dia ny fahatsapanao fa farafaharatsiny ny fahatsapana fa 'tena azo inoana' izany. Dia manatona ny Eureka fotoana izay rehetra fahadisoam-panantenana noho ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ny miharihary fampielezan-kevitra, sy (matetika) lainga, mitady. Toa efa nidiran-tsambikina kokoa io nila izany nanomboka tamin'ny 2014. Irma Schiffers, ohatra, dia sahirana be amin'izany. Misy zavatra ho an'ny olon-drehetra ao amin'ny fampitam-baovao hafa. Mino ve ianao fa mipetraka ny tany? Dia hahazo izany ianao. Ny finoana ao amin'ny hafa firenena na ny UFOs, dia afaka mankany amin'ny fantsona maro ary afaka mahita ny ara-panahy mihitsy aza "fanamafisana" ny olona iray ho Martijn Van Staveren. Mino ve ianao fa sorona ny ankizy? Azonao atao koa ny mahita izany vao haingana miaraka amin'ny "ex-bankerer sy insider" Ronald Bernard. Ary mazava ho azy fa misy ny lohahevitra izay manakorontana ny sofiny amin'izao fotoana izao: 911, vaksiny sy chemtrails. Hanompo ao amin'ny WantToKnow, ny Matematika, ny Ninefornews ary ny sisa. Azontsika atao ny miantso azy io hoe 'fiangonana media mahazatra' ary ny fiangonana dia mila ministra tsy misy dikany. Mpitandrina manana làlana tsara, fahalalana tsara sy tantara manentana fanahy. Ireo izay sahy miantso ihany koa fa ny tany dia tsy fisaka ary ny "hetsika sainam-pirenena diso" angamba indraindray ny tsaho na ny olona antso anareo dia nilalao zoal TV mpitory ny vahoaka Amerikana ve nilalao, tsy tianao ao amin'ny fiangonana.
Momba ny fanirianao hitady ny marina. Ity fanentanana ity dia vokatry ny fifohazan'ny maro ho an'ny fifandonana sy ny fitaka ataon'ny media mahazatra. Raha te hahita ny marina anefa ianao, dia tsy tokony hianatra hampiasa ny atianao. Mila mianatra ianao fa afaka mahita tsara azy amin'ny fiangonana miorina mafy sy azo itokisana: ny fiangonana medya hafa. Amin'izany fomba izany dia hianatra ny hitoky amin'ny minisitra indray ianao, tahaka ny pasitera nitory ny fahamarinan'ny polipitra tamin'ireo mpiangona. Amin'izay dia ho afaka hiantehitra amin'ny minisitry ny media vaovao hafa indray ianao. Ary noho izany antony izany dia zava-dehibe ny hahafantaranao fa manana pasitera azo itokisana ianao izay mandoka anao ny fahamarinana azo antoka satria nanadihady izany. Dia tsy mila manao na inona na inona ianao. Tsy manam-potoana hanaovana izany ianao ary ny pasitera dia nianatra izany. Eny ary, izany dia momba ny hafatry ny Coöperatie Vrije Media; ilay tetikasa izay toa nokasain'i Ad Broere sy Irma Schiffers, saingy avy amin'ny andian'ireo haino aman-jery hafa miara-miasa ao ambadiky ny sehatra. Izany no hetsika efa noresahina nandritra ny fanatrehako tokotoko nandritra ny fihaonana niaraka tamin'i Marcel Messing.
Inona no tetika nandritra ny taona vitsy lasa izay? Rehefa nihodina fa tsy ilaina hatao manaisotra ny mpikaroka Martin Vrijland fanalam-baraka sy fanendrikendrehana amin'ny alalan'ny aterineto, dia tsy hiteraka "kivy", izay an'arivony mpamaky dia tampoka isan'andro miatrika fahazavana vaovao avy amin'ireo mpanoratra tsy niriana. Tsy maintsy nakatona io fahatapahana io ary nanakatona io dity io, dia nomanina tanteraka tamin'ny hazo ny kianja filalaovana. Betsaka ny hazo izay afaka nitombo kely ary kely ny zavatra rehetra dia nahaliana ny firesahana momba ireo lohahevitra voalaza ireo, saingy miavaka hatrany. Natsangana ny ala iray tranokala tao anatin'ireo fampahalalam-baovao hafa. Izany ala tamin'ny andro rehetra efa fehezin'ny ny AIVD sy ambadiky ny sehatra efa niasa tsara ireo vohikala miaraka mandrindra ny mpandrindra toy ny varahina sy Marcel Jonkers Guido, nefa nanana maso eo amin'ny sary an-tsaha toy ny tsy fantatra mazava en fampahalalana bebe kokoa. Tsy nahita ny ala tamin'ny hazo intsony ianao! Ary izany indrindra no fikasana. Ary tada! Vetivety dia misy ray sy reny sasantsasany azo itokisana (izay efa tonga avy amin'ny fako). Ny Ad Broere mpahay toekarena azo itokisana ary ny Irma Schiffers azo itokisana. Moa ve tsy manome anao ho tsara 'zavatra tsara' ny votoaty? Ary mazava ho azy fa manana ny marary sy sambatra i Arjan Bos of Earth Matters, izay mazava ho azy fa te hanampy hanangona ireo fiangonana madinika rehetra ireo ao amin'ny fiangonana lehibe 1. Azonao atao ny maminavina hoe iza no manendry ny minisitra. Ary mba te ho lasa mpikambana ao amin'ity fiangonana ity ve ianao? Ny fiangonana dia mila vola mba hanatanterahana ny drafitra tsara rehetra. Fa misy ny vola ambadiky ny sehatra (araka ny nanazavan'i Marcel Messing tsy nahy tamin'ny fanatrehako nandritra ny fivoriana) dia tsy mila mahafantatra ianao. Ny Fiangonana Katôlika koa dia manana vola, saingy amin'ny maha-mpikambana anao dia manamafy ny finoanao ary manolo-tena amin'ny fiangonana ianao. Tokony hanao izany amin'ny fiangonan'i De Vrije Media koa ianao izao. Hitady ny fahamarinana ho anao izy ireo. Na izany na izany, dia "azo antoka izy ireo" ankehitriny. Ah, ary raha efa mpikambana ao amin'io fiangonana mendri-pitokisana io ianao, dia tsy mila manohana an'i Martin Vrijland, izay tsy afaka mahazo fanampiana ara-tsosialy akory aza. Raha ny marina dia efa mandray anjara amin'ny klioba iray ianao izay mampiseho fa azo itokisana. Tongasoa ato amin'ny fiangonana vaovao. Natao ny iraka. (Vakio eto ambany ny lahatsary)
Hatramin'izao, afaka manompo amin'ny "fahamarinana marina" an'ny De Vrije Media ianao. Toy izao no namoronan'ny AIVD voalohany ny ala ary izany dia manomboka ny vahaolana. 'Ny fomba tsara indrindra hifehezana ny mpanohitra dia ny mitarika azy io. Nefa ahoana no ahafantaranao fa ny AIVD dia ao ambadik'izany? Ahoana no ahafantaranao fa efa voamarina izany? Raiso ny fanambarana nataon'ny banky taloha Ronald Bernard! Iza no milaza ny marina? Eny, mazava ho azy! Araka ny nolazaiko, mitady ny marina ianao ary manompo amin'ny fahamarinana. Na dia marina aza ny 'fahamarinana' Fantatrao ve raha mahita ny marina ianao rehefa mandeha sambo eny amoron-dranomasina? Manana rano manodidina anao ianao, jereo ny morontsiraka afovoan-tanàna ary ho voahodidin'ny mpiara-dia aminao; Izany no fahamarinana tsy azo lavina. Ny zavatra tsy hitanao dia ny zava-mitranga eny amoron-dranomasina. Ny sambo voamarina dia nandeha lavidavitra teny amoron-dranomasina.
Ao amin'ny sary etsy ambany dia tsy voatery hijery tsara ianao raha mahita andalana miloko mena. Ary indraindray dia hitanao ny tendrony. Azonao atao ihany koa ny mahita ny teboka rehetra indray mandeha?
Ao amin'ny sary iray hafa (jereo etsy ambany) dia afaka mahita tsara ny sary mainty sy fotsy, fa raha mijery lava kokoa noho 10 segondra (hampifantoka ny masonao amin'ny 4 teboka), dia akimpiko kely ny masonao sy ny zava-drehetra ny mijery mifandrambondrambona, Hahita "toetra mahazatra" ianao. Hahita sary miafina ianao. Amin'izany fomba izany no ahafahanao mihira ny fahitanao ny fahamarinana. Raha heverinao fa mahita zavatra marina ianao, dia toa mbola tsy mahita hevitra vitsivitsy ianao na ny sary hita maso manazava sary lalindalina kokoa. Ahoana raha ny fampahalalam-baovao mahazatra no manome anao ny 'mainty' eo amin'ny sary eto ambany sy ny media hafa izay "fotsy" anao? Inona no mipoitra? Mbola tsy hitanao ny sary miafina. Ary izany, araka ny hevitro, dia ny fikasana.
Ny teny hoe 'worker light' dia fiteny iray mahafinaritra amin'ny fampahalalam-baovao hafa. Io hazavana io dia mamirapiratra ao anaty haizina. Na toa an'i Ronald Bernard ity sarimihetsika ity dia manazava tsara izany rehefa miteny izy fa misy vondron'olona iray mipetraka ao anaty haizina mandritra ny fotoana fohy ary tsy maintsy ampiasaina any amin'ny haizina. Avy eo ny jiron'ny ankamantatra dia manaitra kokoa ary ny rehetra dia tototry ny hazavana. Mahaliana ny feo, saingy io hazavana io dia mety miresaka momba ny hazavana Losifera. Hiverina any aoriana aho. Ny fanontaniana tokony hapetrakao amin'ny tenanao dia: Raha milaza ny 'fotsy' (mazava) ao anaty sarontava amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra ny fampahalalam-baovao mahazatra, mahita ny marina ve ianao na aloky ny marina?
Tadiavinao porofo mafy fa ny fampahalalam-baovao mahazatra napetraky ny AIVD. Teny ambarako izy ireo, noho izany dia azoko tsara. Tahaka ny sary etsy ambony; dia mamela anao mahita ny mainty sy ny fotsy, fa hizaha ny sary miafina, tsy maintsy mijery kely 4 intsony ny teboka, ary avy eo blinking rehetra mijery ny masonao, ka mba mitandrina ny zavatra ho hitanao. Afaka maneho anao ny fifandimbiasan'ilay sary hita maso ihany aho. Ary izany contours afaka takatro fa indraindray ny olona no manao ny tantara ary toa 'fotsy' endrika mainty eo amin'ny sary, nefa hanafina ny sary miafina. Raha hitanao ny sary miafina ao amin'ilay sary hita maso dia tsidiho fotsiny ny masonao.
Ny tantaran'i Ronald Bernard dia ohatra iray tonga lafatra. Ronald dia milaza aminao izay rehetra mety ho marina. Lazainy aminao ny fomba fiasan'ny orinasan'ny banky ary manazava mihitsy aza fa mpanao politika ny ankizilahy kely amin'ny rafitra banky; ny rafitra banky eo an-tampon'ilay piramida. Ao an-tampon'ilay piramida ny bankin'i BIS; eo ambanin'ny banky foibe sy eo ambanin'ny banky tsotra. Manazava ilay sarin'ny pyramida fanta-daza izy fa ny olon-drehetra efa zatra efa ela dia efa nahalala ny fampahalalam-baovao hafa. Ronald dia toa mametraka ny rantsan-tanany amin'ny toerana maloto rehetra! Irma Schiffer nanadihady azy sy amin'ny faran'ny Fizarana 2 ny fanadihadiana andian (izay toa fifanandrifian-javatra maka milamina Masonic isan'ny 33 minitra) Antonina manana tie indray Masonic nahasarika olona niteny sahy nanatsoaka ny tantara an-fisalasalana indray mandeha hentitra sy tezitra . Azo inoana fa nitodika tany amin'ny fampahalalam-baovao mahaleotena mifandraika amin'ny Micha Kat, izay nihaza ny CV momba ny Bernard. Tsy nanoratra momba an'i Ronald aho tamin'ny fotoana namokarana ity horonantsary ity.
Nanao peta-drindrina tamin'ny alàlan'ny NLP tao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra teo aloha aho, saingy i Ronald Bernard dia mampiasa izany manontolo andro. Indrindra fa ny fihetsiky ny tànana tao anatin'ny minitra faran'ny lahatsary etsy ambany dia manome famantarana mazava. Ny famelabelarana ny tanana dia manome ny hafatra sasin-teny hoe: "Tsara aho" (ary kely ianao); ny fihetsika mahaleotena mifehy ny fifehezan-tena izay mihetsiketsika amin'ny hatezerana amin'ny fihetseham-po ary farany misy ririnina mihenjana; ny rantsantanana manondro dia miteny ny feo sy ny vazivazy miteny hoe 'mihazona ny savafinao'. Ronald dia manome ny hafatra tsy fantany mikasika ny hoe "Manana fahefana aho" amin'ny fomba fitafy, akanjo fihetsika ary am-bava. Ny resadresaka manontolo dia miresaka amin'ny "fahamarinana tsy azo iadian-kevitra" ary i Irma dia manana ny tanjona holazaina hoe 'eny' sy 'marina', mba hitazonana ny sainao amin'ny fomba fananganana. (Vakio eto ambany ny lahatsary)
Ao amin'ny ahy lahatsoratra voalohany Momba an'i Ronald Bernard dia nanazava ny fomba mazava aho hamakiana fa mpilalao sarimihetsika izy. Irma Schiffers koa dia toa nampiasa ny fahagagana nataon'i Derren Brown "for sale" (jereo ity sarimihetsika ity) no nampiofana. Mazava ho azy fa lavorary ihany koa ny tantarany. Mpanakanto izy, manana HSP ary .. afaka mamaky izay lazainy ianao [fitongilanana]
Born (dia nianjera bebe kokoa) amin'ny 3 Febroary 1962 any an-toeran-kafa ao Hilversum; Japoney mpitsabo; fahamarinana seeker; mpanazatra; Light mpiady; tena natokana ho an'ny olona, ​​biby ary natiora; mahatsapa sy mahazatra amin'ny famitahana sy ny kolikoly, mpanao sary hosodoko; (ex-) bassist; Eny koa HSP; social idealista; fahatsapana vazivazy, ara-panahy sy ara-nofo (rehetra-in-iray!) ary waterman amin'ny optima forma; Mandeha ho azy aho fahafahana, fahaleovan-tena, fitoviana, fahamarinana, mangarahara ary fahamarinan-toetra. Matetika ny olona no tsy manaiky, tsy mahazatra ary mahatsikaiky ".
Eto izahay dia manana ny teny hoe 'mpanazava light' indray, izay ho hitanao matetika kokoa amin'ny fampahalalam-baovao hafa. Tsaroanao ve hoe avy amin'iza io hazavana io? Iza no fotsy an'io fotsy hoditra io? Mazava ho azy, i Irma dia mahatsapa be loatra amin'ny HSP azy. Tsara izany, satria noho izany (ary tsy tamin'ny alalan'ny fanohanany avy amin'ny AIVD) dia fantany tampoka ny fomba hiresahana momba ny fikomiana rehetra hatramin'ny 2014. Tsy izany anefa no zavatra tokana! Irma ihany koa. Tsara izany, tsara ianao amin'ny Irma! izy ireo mahatsapa na ny marina na ny zavatra mety ary ny loko mena dia manintona ny fotsy.
Ankehitriny dia mety hieritreritra ianao fa miantso fotsiny aho ary tsy misy porofo. Hitanao ve izay tokony ho hitanao amin'ny sary mainty sy fotsy? Manazava ny fifandraisana aho. Tsy maintsy miezaka mijery azy fa tsy ny rehetra no mahita azy. Ny porofo indraindray dia mitoetra ao amin'ny marika sy ny hafatra miafina.
Hatramin'ny vao haingana, ireo hafatra miafina ireo dia tsy hita mazava, fa haseho anao. Ny hany olana dia tsy afaka mahita azy ianao. Mety efa any am-piangonana ianao amin'izao fotoana izao ary efa mandoa vola ary ny Coöperatie Vrije Media na efa nandoa ny fitiavam-bola 100 ho an'ny Happy B (izay tsy afaka milaza ny tenany ho banky). Tsy handeha hanafika fiangonana iray izay manazava mazava ny haizina ve ianao? Azonao atao àry ny manakimpy ny masonao amin'ny marika famantarana.
Ohatra, misy mpamaky iray dia nanamarika izao manaraka izao momba ny Joy B (ank) an'i Ronald Bernard [quote]
Efa ela aho no nijery izany pejy fandraisana ao amin'ny banky falifaly. Ny zavatra voalohany hitanao dia mazava ho azy fa ny loko orange izay maneho ny mari-pamantarana phallic amin'ny fotoam-pialany. Ankoatra izany dia ny teny filamatra hoe "ny bankinao amin'ny fanabeazana."
Ary ny mpaneho hevitra iray dia nilaza hoe: [quote]:
Ny bolongana db an'ny De Blije Bank dia mirona. Azonao an-tsaina ve ireo sarin'ny antoko Rothschilds ahitana sary? Ny karatra fanasana dia nosoratana tamin'ny fitaratra jereo eto.
Ny fitaratra dia mari-pamantarana manan-danja ho an'ny teknikan'i Aleister Crowley (Luciferian) momba ny 'famerenana mivadika' sy ny hafa 'teknika mpanohitra'. Ny gorodona dia maneho, tahaka ny hoe, ianao Luciferianina. Ny 'd' amin'ny sariohatry ny Happy B dia manome ny 'b' amin'ny sary fitaratra. Ankoatra izany, ireo litera roa ireo dia manome ny marika mampihetsi-po (izay ny teny hoe 'fametrahana' amin'ny teny filamatra 'ny banky amin'ny fanabeazana' dia manondro ny fananganana phallus). Izany dia famantarana maroloko. Saingy, aoka isika tsy ho mafy orina ary hijery ny sari-dàlan'ny fananganana ny vahoaka United. Tsy mila mijery tsara ny piramida ve ianao? I Losifera sy ireo mpanohana ny mpanohana ny "iray ihany izahay rehetra," ny "Iray Eran-tany" sy ny "One World Fivavahana" hamirapiratra foana ny alalan 'ny Luciferianism satria mino fa manaja ny lalàna ny safidy malalaka. Tiany koa ny hampiseho aminao ny marina, hany ka miloko ny sary rehetra. Izy ireo dia mamorona ny fotsy eo amin'ny mainty mainty, fa ianao ihany no mahita ny angona ao amin'ilay sary miafina.
Te hanambatra ny olon-drehetra ny Firenena Miray. Tsy izany ve no tena atao hoe Losifera? Azonao atao ny mihevitra ny piramida ho toy ny tsy manan-tsiny. Fantatrao ve ny fihetsika nataon'ny 666 avy amin'i Arjan Bos avy any amin'ny Earth Matters miaraka amin'ny iray amin'ireo horonan-tsariny YouTube? Ireo mpitory teny ao amin'ny fiangonana media mahazatra dia tia mampiseho anao any amin'ny toby, saingy miafina. Fantatrao ve ny fitaratra ao amin'ny lahatsary etsy ambany etsy Irma Schiffers? (Vakio eto ambany ny lahatsary)
Ny mpanadihady ny lahatsoratry ny lahatsoratra teo aloha dia mitohy amin'ny fanamarihana [mbola tsy voamarina]
Ny Blije B. dia miorina any Soisa, ahoana ny fomba hafa, sa tsy izany? Azo antoka fa hivoatra ny foto-kevitr'izy ireo ary avy eo horoahina any amin'ny banky hafa, heveriko fa izany.
Raha tsy famantarana eo amin'ny rindrina izany? Noho izany dia lazaina fa bankera taloha ianao; dia manondro ireo toerana maloka rehetra izay efa hita tany amin'ny fampahalalam-baovao hafa; manangona izany amin'ny andiana tafatafa miaraka amin'i Irma Schiffers; hanomboka banky ianao! Ronald sy Irma ary ireo mpilalao hafa ao amin'ny haino aman-jery hafa dia niezaka nandresy lahatra anao tamin'ny tantara tsara sy azo itokisana, izay ahafahana mahita ny singa rehetra fa mety ho hitan'ny mpikaroka marina rehetra nandritra ny taona maro. Famoronan-java-tsoa izany ary napetraka tsara. Saingy mbola manana ny fofon'ny hetsika avo lenta manodidina azy ireo izy. Irma Schiffers dia tsy nametraka fanontaniana manan-kery 1 ary ny tantaran'i Ronald Bernard dia tsy azo lavina. Na dia izany aza, ny mediam-pifaneraserana rehetra dia noraisina ary nampiasainy hanangonana ny fampitam-baovao hafa ho fampiroboroboana ny Coöperatieve Vrije Media. Haneho azy ireo ny lalana amin'ny ala (orinasa AIVD) natao ho an'ny toeram-pampahalalam-baovao hafa (tsy manondro anao amin'ny Martin Vrijland).
Diso fanantenana sy ankehitriny?
Tsara, misaotra noho ny fahadisoam-panantenana sy ny ankehitriny? Iza no azoko itokisana ankehitriny ary inona no mbola azoko vakiana na tsia. "Izahay dia avy amin'ny toeram-pisakafoanana kely, manoro ny toeram-ponenan'ny tohotra"Moa ve ho tena mora, fa Manoro hevitra anareo aho afa-mamaky ny lahatsoratra, indrindra fa tsy havela ho ny" fiangonana vaovao "sy ny" mpitandrina hafa, fa mba hampavitrika anao manokana intuitive fahaizana sy ny fanahinareo to connect. Eny, ireo mpanazava "hazavana" koa dia milaza aminao izany, saingy te hitazona anao ao amin'ny tahiry Losifera izy ireo. Manantena aho fa handositra izany ianao. Koa raha loko ny sarinao ny fampitam-baovao sy media dia tokony ho hitanao amin'ny sary ilay sary miafina. Ataon'izy ireo ho tsy azonao ny sary miafina.
Hijery ny sary etsy ambony miaraka amin'ireo loko mena. Hitanareo izao ny doka ary avy eo ny teboka ary toa mitovy amin'ny dots mifandray amin'ireo fampitam-baovao hafa ireo, saingy tsy mahita azy ireo mihitsy ianao. Manakana anao hiala amin'ny famoahana tanteraka ny lisansa Losifera izy ireo. Na dia hilaza aminao aza izy ireo fa ny ankizy sorona dia atao ao an-tampony. Nihetsi-po tamin'ny fihetsehampon'i Ronald Bernard ve ianao? Sa aleonao mpikamban 'ny Fiangonana mahafinaritra ihany? Ary aza adino ny Free Media! Tena mila ny fanohananao izy ireo!
Izay toerana rehetra ataon'ireny tranonkala ireny ihany koa dia mangataka fanampiana raha toa ka mangalatra vola. Tetik'ady azo itokisana izany, mba hisamborana ireo rivodoza, izay tena simba ary tsy manana mena mena. Iza no handray ny fangatahan'i Martin Vrijland ho fanohanana raha toa ka toa tsara avokoa ireo tranonkala rehetra (voarakotry ny AIVD)? Ny marina ... ary izany no tena fikasana.
Ny fahalalahana maneho hevitra dia mety misy amin'ny fomba ofisialy, fa ianao kosa dia ho simba fotsiny ara-tsosialy amin'ny lafiny ara-bola. Amin'izany fomba izany dia afaka mitsikera ny tsikinao ianao. Satria lasa miankina tanteraka amin'ny fanomezana aho noho ny fanalam-baraka sy ny fanalam-baraka ary ny fanafihana amin'ny aterineto, te-hanontany anao aho hanohana ahy. Tena fampakaram-bady tena izy (mifanohitra amin'ireo antso avy amin'ireo tranonkala mpanohitra izay mandroaka ny rehetra).
Mba hanazavana fa tsy mivarotra trano aho, dia azonao atao ny mijery ny haben'ireo fanomezana ireo an-tserasera ity rohy ity.
Anontanio ny zava-drehetra! Eritrereto ny tenanao. Aza adino amin'ny "fahamarinana saika" sy ny famafazana ny sary, mba tsy hahatakaranao ny sary marina sy miafina.
Total visits: 1.454.992